लेबर काम गर्ने भाइको जादुमय स्वर, भ्वाइस अफ नेपालमा छनौट भएर पनि आर्थिक अभावका कारण जान पाएनन् (भिडियो सहित) – Ap Nepal
लेबर काम गर्ने भाइको जादुमय स्वर, भ्वाइस अफ नेपालमा छनौट भएर पनि आर्थिक अभावका कारण जान पाएनन् (भिडियो सहित)
घरको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएका कारण दिनभरी लेबर काम गरेर आफुले नै घरको खर्च अनि वृद्ध बुबा र सानो छोरोको औसधि किन्नुपर्ने बाध्यताले आफ्नो सपना पूरा हुन नसकेको भन्दै रोए । उनले एकपछि अर्को गर्दै गितहरु गाएर सुनाए । हेर्नेको भिड थियो सबै भावुक बने । एक जना प्रख्यात गीतकारले एक पटक यसो भने: “शब्दले हामीलाई सोच्न लगाउँछ।
सङ्‌गीतले हाम्रो मनमा भावना जगाउँछ। तर जब शब्द र सङ्‌गीत मिलेर गीत बन्छ, त्यसले हाम्रो मन छुन्छ।” गीतद्वारा स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो बुबा यहोवाको प्रशंसा गर्नु अनि उहाँप्रतिको प्रेम प्रकट गर्नु कत्ति राम्रो कुरा! त्यसैले एक्लै हुँदा होस्‌ या मण्डलीमा भाइबहिनीसित मिलेर, गीत गाउनु साँचो उपासनाको महत्त्वपूर्ण भाग हो।
यदि हामी राज्यगीत गाउनुलाई साँच्चै हाम्रो उपासनाको अभिन्‍न भाग ठान्छौं भने गीत गाउने समयमा बाहिर निस्कनेछैनौं वा गीत गाउने भाग छुटाउनेछैनौं। त्यसैले हामी प्रत्येकले आफैलाई यस्तो प्रश्‍न सोध्नुपर्छ: ‘सभामा गीत गाउने कुरालाई म कस्तो ठान्छु? हर्षोल्लासका साथ गीत गाउन मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने म के गर्न सक्छु?
अनि भावसहित गीत गाउन म के गर्न सक्छु? लेबर काम गर्ने तर जादुमय स्वर भएका भाइ झापामा भेटिएका छन । निकै अचम्म लाग्ने स्वर भएका भाइ जो भ्वाइस अफ नेपालमा छनौट भएर पनि गरिबीका कारण जान नपाएको बताए । उनले निकै मीठो गित गाउछन । उनको स्वर कस्तो लाग्छ ? तल भिडियोमा हेर्नुहोला
Prevश्रीमतीलाई अर्कै केटासंग देखेपछी श्रीमानले झा,प ड लगाए, श्रीमती पैसा सुन लिएर फरार, रोए श्रीमान (भि डियो सहित)
Nextएकदमै खु: शीको खबर ! अनिता आफै हिड्न सक्ने भइन, अनुहारमा यस्तो चमक -हेर्नुहोस् पछिल्लो (भिडियो )